67 – တက္ကသိုလ်မောင်မောင်ခင် နှင့် ပါမောက္ခ ဦးအောင်ခင် | Lumyo Chit
67 – တက္ကသိုလ်မောင်မောင်ခင် နှင့် ပါမောက္ခ ဦးအောင်ခင်
(အမျိုးသားစာပေဆုပထမဆုံး ပြဇာတ်စာပေဆုရသူ )
“အဆင်းခက်ခက် အတက်ကြမ်းကြမ်း” ပြဇာတ်စာအုပ်ဖြင့် ရရှိသည်။ အမျိုးသားစာပေဆု သက်တမ်းတစ်လျှောက် ” ပြဇာတ်စာပေဆု” ကို ဦးစွာရရှိသော
စာအုပ်ဖြစ်သည်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ တရားမှန်စီရင်ရေးနှင့် လူတို့၏ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်ရေးကို ဦးတည်ပြုစုထားသည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်၏ ပြက္ခဒိန်
တစ်နှစ်အတွင်း ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသမျှ စာအုပ်များအနက် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်၊အမျိုးအစားအလိုက် အကောင်းဆုံးတစ်အုပ်ကို ရွေးချယ်၍ တစ်ဆုတည်းသာ
ချီးမြှင့်သည်။ အမျိုးသားစာပေဆု ပုံစံသစ်အကောင်းဆုံးတစ်အုပ်ရွေးစနစ်ဖြင့်ပထမဆုံးရရှိခြင်းဖြစ်သည်။
တက္ကသိုလ်မောင်မောင်ခင်သည် ပြည်ခရိုင်၊ ပန်းတောင်းမြို့ဇာတိဖြစ်သည်။ ဖခင်မှာ အငြိမ်းစားပညာအုပ် ဦးရာကွတ်ခေါ်
ဦးအောင်ပွင့်ဖြစ်သည်။ မိခင်မှာ ဒေါ်မမကြီးဖြစ်သည်။ ၁၉၂၈ ခု ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ရက်တွင် ဖွားမြင်သည်။ အမည်ရင်း ဦးမောင်မောင်ခင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင်
ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရသည်။ ၁၉၅၂ တွင် စာပေဗိမာန်မဂ္ဂဇင်း စာတည်းအဖွဲ့တွင်လက်ထောက်စာတည်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ပြန်ကြားရေးဌာနတွင်
ဒုတိယအတွင်းဝန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသုံးစာအုပ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဗဟိုကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဖြစ်သည်။
ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း ကော်ပို ရေးရှင်းတွင် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်လည်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် သဇင်မြို့စာညွန့်များ စာအုပ်ဖြင့် အမျိုးသားစာပေဆု၊ စာပဒေသာ တတိယဆု ရသည်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင်ပင်
မညီမျှသော ညီမျှခြင်း ဝတ္ထုတိုစာအုပ်ဖြင့် အမျိုးသားစာပေဆု ဝတ္ထုတိုဒုတိယဆုရရှိသည်။ ၂၀ဝ၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် နေ့တွင်
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂/၂၀ဝ၇ အရ
ဝိဇ္ဇာပညာထူးချွန်တံဆိပ် (ဒုတိယဆင့်) ချီးမြှင့်ခံရသည်။ အကန်တော့ခံသက်ကြီးစာပေ ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
[အလားတူ အမျိုးသားစာပေဆုရခဲ့သူများမှာ တင်စိန်ငယ် ]တောစတွိုင်း၏ ဝတ္ထုတိုနှစ်ပုဒ်}စာအုပ်ဖြင့် အမျိုးသား စာပေဆု၊ ဘာသာပြန်တတိယဆု (၁၉၆၇)၊ ဒေါက်တာရီရီ
]မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေ (၁၇၁၄-၅၂)}စာအုပ်ဖြင့် သုတပဒေသာဝိဇ္ဇာ၊အမျိုးသားစာပေဆု (၁၉၇၅) တို့ဖြစ်သည်။]
ဒေါက်တာသန်းဝင်း (မောင်သန်းဝင်း- ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)
B.A.(Honours), M.A., H.G.P., Ph.D.
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒဌာန ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဦးဆောင် ကြိုးပမ်းခဲ့သူ
ရခိုင်ပြည်၊ သံတွဲဇာတိဖြစ်သည်။ ၁၉၁၈ ဧပြီလ ၂၁ ရက်တွင်မွေးဖွားသည်။ ၁၆ နှစ်သားအရွယ်တွင် ၁၀ တန်းကို ဂုဏ်ထူးငါးဘာသာဖြင့် အောင်မြင်သည်။ ၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင်
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ ဆက်လက်ပညာဆည်းပူးခဲ့ရာ ဥပစာ သိပ္ပံ အပိုင်း(က) နှင့်(ခ)ကို တစ်နှစ်တည်းဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် သိပ္ပံဘွဲ့ကို
ဓာတုဗေဒ ဂုဏ်ထူးတန်းဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ Upper Division 2nd Class ဆုကိုဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ဓာတုဗေဒထူးချွန်သူများအတွက် ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော ဦးရွှေလေး ရွေတံဆိပ်ကိုလည်း ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၃၈-၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် ရူပဗေဒဂုဏ်ထူးတန်း သိပ္ပံဘွဲ့ကို အင်္ဂလိပ်အစိုးရက ချီးမြှင့်သော ရွှေတံဆိပ်နှင့်အတူ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ တစ်နှစ်တည်းတွင် ဂုဏ်ထူးဆင့်ကဲ
ရရှိခဲ့သောကြောင့် ပညာသင်ဆုရရှိပြီး ၁၉၃၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၉ ရက်တွင်ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့သို့ သွားရောက်ခဲ့ရသည်။
လန်ဒန်တက္ကသိုလ်မှ D.I.C နှင့် A.I.R.C ဒီပလိုမာဘွဲ့များကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည်။ ပါရဂူဘွဲ့အတွက် ဆက်လက် ဆည်းပူးရန် စီစဉ်ပြီးမှ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွား၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာခဲ့ရသည်။
မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မှ ရရှိသည်။
၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ လက်ထောက်ကထိကအဖြစ် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ငါးနှစ်အကြာတွင် ဓာတုဗေဒကထိက ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင်
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ ဓာတုဗေဒ ပါမောက္ခဖြစ်ခဲ့သည်။ ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒဌာနပေါ်ပေါက်ရန် ဦးဆောင်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
ဆရာဦးအောင်ခင်သည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဓာတုဗေဒဌာနတွင် နှစ်ပေါင်း ၃၇ နှစ်တိုင် လက်ထောက်ကထိကမှ ပါမောက္ခအထိ ပညာရေးတာဝန်များကို အဆင့်ဆင့် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၈ခုနှစ်တွင် အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။
အငြိမ်းစားယူပြီးနောက် နိုင်ငံတော်က ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၌ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် သုံးနှစ်တာ ထမ်းဆောင်စေခဲ့ သည်။ ပါမောက္ခအဖြစ် တာန်ဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်
ဓာတ်မြေဩဇာစက်ရုံများ တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းအကောင်အထည် ဖော်ရေးအကြံပေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန
ရှေးဟောင်းပစ္စည်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်၊ သတ္ထု တွင်းဝန်ကြီးဌာနအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်၊ ဗဟိုသုတေသနအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်၊ ဓာတုသိပ္ပံဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ
သုတေသနအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒေသကောလိပ်များ တည်ထောင်ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် တက္ကသိုလ် နယ်မြေ၊ အခြေခံ
အလုပ်သမားအစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် အလုပ်သမားအစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်၊ကမာရွတ်မြို့နယ် စာပေလုပ်သားအဖွဲ့ဝင် အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ပါမောက္ခဦးအောင်ခင်သည် ဓာတုဗေဒပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်း များကို အင်္ဂလိပ် မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားပြုစုခဲ့သည်။
၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်နေ့တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူ မြို့ ၌ ကွယ်လွန်သည်။
တက္ကသိုလ် မွတ်စလင်မ်လူငယ်များအသင်း ဥက္ကဌ ပါမောက္ခ ဦးအောင်ခင်
ဆရာကြီးသည် ၁၉၁၈-ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို့၌ မွေးဖွားသည်။ ၁၆ နှစ်သားအရွယ်တွင် ၁၀ တန်းကို ဂုဏ်ထူး ငါးဘာသာဖြင့်အောင်မြင်ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ ပညာဆည်းပူးသည်။ တက္ကသိုလ်တွင် ဥပစာသိပ္ပံအပိုင်း (က)နှင့်(ခ)ကို တစ်နှစ်တည်းဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၈-ခုတွင် ဓာတုဗေဒဂုဏ်ထူးတန်းကို့ Upper Division 2nd Class ဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဓာတုဗေဒထူးချွန်သူများ အတွက် ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော ဦးရွှေလေးရွှေတံဆိပ်ဆု ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၃၈-၃၉ ခုနှစ်တွင် ရူပဗေဒဂုဏ်ထူးတန်း အောင်မြင်သည် ။ရွှေတံဆိပ် ချီးမြှင့်ခံရသည်။ တစ်နှစ်တည်းတွင် ဂုဏ်ထူးဆင့်ကဲ ရသဖြင့်
ပညာသင်ဆုရပြီး ၁၉၃၉-ခု သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့သို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ လန်ဒန်တက္ကသိုလ်မ DIC နှင့် A.I.R.C ဒီပလိုမာဘွဲ့များကို ရရှိခဲ့သည်။ ပါရဂူဘွဲ့အတွက် ဆက်လက်ဆည်းပူးရန်စီစဉ်ပြီးမှ ဒုတိယ ကမ္ဘာ စစ်ကြီး ဖြစ်ပွား၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ခဲ့ရသည်။ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ကိုရန်ကုန်မှရရှိသည်။ ၁၉၄၁-ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ လက်ထောက် ကထိကအဖြစ် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ငါးနှစ်အကြာ ပါမောက္ခဦးဘိုးသာ လက်ထက်တွင် ဓာတုဗေဒကထိက ဖြစ်လာသည်။
၁၉၅၄ ခုနှစ် တမန်တော်နေ့အထိမ်းအမှတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဟောပြောပွဲတစ်ရပ်ကို ရန်ကုန်မြို့ ရာမာကရစ်ရှနာမစ်ရှင်အသင်းက ကြီးမှူး၍ အသင်းတိုက်တွင် ကျင်းပသည်။ ထိုစဉ်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကထိက ဦးအောင်ခင်က အစ္စလာမ်၏ သွန်သင်ချက်များ သဘာဝကျပုံ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရှေ့ရှုပုံ စသည်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
မျိုးဆက်သစ်တက္ကသိုလ် မွတ်စလင်မ်ကျောင်းသားများနှင့် ကျောင်းသားဟောင်းကြီးများ ခင်မင်ရင်းနှီးစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၁၉၅၉ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းသော တက္ကသိုလ် မွတ်စလင်မ် လူငယ်များအသင်းတွင် ကထိက ဆရာကြီး ဦးအောင်ခင်သည် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ထိုနှစ် အမှုဆောင်များမှာ –
ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ခင် M.Sc (ကထိက) ဓာတုဗေဒဌာန
ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်ကျော် B.Sc (Hons) C.Sc
ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာခင်အေးစီ M.B.B.S Dip.G.O
အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်မောင် (I.T.O) Group E.Rangon
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ညွန့်ညွန့်လွင် B.A
တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး ဦးလှမောင် B.A
ငွေထိန်း ဦးတင်မောင် B.A,B.Com B.L.R
စာရင်းစစ် ဦးသာထွန်း B.Com,B.L.R.A
ဦးသန်းတင် B.A. B.L (Advocate)
ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း B.A B.L
ဒေါ်လှရွှေ B.A B.L
ဒေါက်တာဒေါ်ရီရီ Ph.D (Landon)
ဦးသန်းတင် (I.T.O) Salary Circle Rangon
ဦးမောင်မောင်ကြီး Pakisan Embassy တို့ ဖြစ်သည်။
၁၉၅၉-ခုနှစ်တွင် ဆရာကြီးသည် ပါမောက္ခရာထူး တိုးမြှင့်ခံရသည်။ ထိုစဉ်ကုန်ထုတ် ဓါတုဗေဒဌာန ပေါ်ပေါကရ် န်ဦး ဆောင်ြကိုးပမ်း သည။် ထိုဘာသာရပ်သည် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်သင်ကြားနိုင်မှုကို လမ်းညွှန်နိုင်သည့် အသုံးချဓာတုဗေဒပညာရပ် ဖြစ်သည်။ ထူးချွန်၍ အရည်အချင်းပြည့်မီပါက စက်မှုတက္ကသိုလ် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်များကို ဆက်လက်ဆည်းပူးနိုင်သည်။ ၁၉၆၉-ခုနှစ်တွင် ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်သင်ကြားမှုကို ဘွဲ့လွန်မဟာသိပ္ပံတန်းအထိ ထပ်မံ တိုးချဲ့သည်။
၁၉၆၉-ခုနှစ်တွင် အနုမြူဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ပါရဂူများ၊သုတေသနလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိရိယာများ၊ စက်ပစ္စည်းများကို IAEA အကူ
အညီနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အနုမြူစွမ်းအင်အဖွဲ့အစည်း၏ ဦးဆောင်တာဝန်ခံ ထောက်ပံ့မှုအရ နျူကလီးယား ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းကို စတင် တိုးချဲ့တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဆရာကြီးသည် ပါမောက္ခအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံများ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး အကြံပေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ရှေးဟောင်းပစ္စည်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန အကြံပေးအဖွဲ့ဝင်၊
ဓာတုသိပ္ပံဘာသာ ရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒေသကောလိပ်များ တည်ထောင်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဆရာကြီးသည် ဓာတုဗေဒပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများကို အင်္ဂလိပ်မြန်မာ ၂ ဘာသာဖြင့် ရေးသားပြုစုခဲ့သူဖြစ်ပြီး ကမာရွတ်မြို့နယ်
စာပေလုပ်သားအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်သည်။ ၁၉၇၈-ခုနှစ်တွင် အငြိမ်းစားယူပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် သုံးနှစ်တာ ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို အဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာတွင် မနားမနေ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ၊ တက္ကသိုလ်မွတ်စလင်အသင်း နာယကဆရာကြီးသည် ၁၉၈၇-ခုနှစ် မေလ ၈ ရက်နေ့တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူ
မြို့၌ အလ္လာဟ်အရှင် အမိန့်တော်ခံယူသည်။
အငြိမ်စား မြန်မာစာ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ဇော်က ရေးသည့် တိုင်းရင်း မွတ်စလင်မ် စာပြုစာဆို ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များ (ဒုတိယတွဲ)
Credtit : Posted by Chit Oo , MMSY
← 66 – တက္ကသိုလ်နန္ဒမိတ် (အစောဆုံး စစ်မှတ်တမ်းဘာသာပြန်စာအုပ်ရေးသူ)
ပသီသမိုင်းလေ့လာချက်များ-စာတန်း (EBook By ပသီဦးကျော်ဦး) →